Xinhua Myanmar - ရုရှား-တရုတ် ဆက်ဆံရေးက ယုံကြည်မှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် ထူထောင်ထားကြောင်း Lavrov က ပြော
တရုတ်	ရုရှား	ဆာဂျီလက်ဗ်ရော့ဗ်
တရုတ်နှင့် ရုရှား နှစ်နိုင်ငံအလံများကို မော်စကိုမြို့ရှိ Red Square တွင် တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)	Europe
မော်စကို၊ ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် - ခေါန်ရိန်
ရုရှားနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့သည် ယုံကြည်မှုရှိသော ဆက်ဆံရေးတစ်ရပ် ထူထောင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ပြည်ပခြိမ်းခြောက်မှုများကို အတူတကွ ဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆာဂျီ လက်ဗ်ရော့ဗ် (Sergei Lavrov) က ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်က ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့က တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ အလွန်နီးကပ်တဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက် ဆက်ဆံရေးတစ်ခု အမှန်တကယ် ရှိနေပါတယ်” ဟု ဝန်ကြီးက အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်သော နှစ်ပတ်လည် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“လူသားလှုပ်ရှားမှုနဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ နယ်ပယ်အားလုံးနီးပါး ပါဝင်တဲ့ အင်မတန်ကျယ်ပြန့်တဲ့ နယ်ပယ်တစ်ရပ်ကို ဖမ်းဆုပ်နိုင်မယ့် ရုရှား-တရုတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအကြောင်း ကျွန်တော်တို့ အဆုံးမရှိ ပြောဆိုနိုင်တယ်” ဟု ၎င်းက ဆင်ဟွာသတင်းဌာန၏ မေးမြန်းမှုကို ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာပလက်ဖောင်းများဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအကြောင်း ပြောကြားရာတွင် လက်ဗ်ရော့ဗ်က ရှန်ဟိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့၊ BRICS ၊ ယူရေးရှား စီးပွားရေးသမဂ္ဂ (EAEU) တို့၏ မူဘောင်များအတွင်း နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် EAEU နှင့် ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမအဆိုပြုချက်အကြား လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသည့် ကြီးမားသော ချိန်ညှိမှုလုပ်ငန်းကို ညွှန်ပြလျက်ရှိကြောင်းဆိုသည်။
ထို့ပြင် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များနှင့် သယ်ဆောင်ရေးဒုံးပျံများ လွှတ်တင်ခြင်းအတွက် အပြန်အလှန် အကြောင်းကြားခြင်းဆိုင်ရာ ရုရှား-တရုတ် သဘောတူညီမှုကို မကြာသေးမီက သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နှစ်နိုင်ငံလုံးအနေဖြင့် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသ၌ တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန် ကူညီထောက်ပံ့လျက်ရှိကြောင်း လက်ဗ်ရော့ဗ်က အလေးထားပြောခဲ့သည်။
လက်ဗ်ရော့ဗ်က ရုရှား-တရုတ် သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှစ်၏ အရေးပါမှုကိုလည်း ထပ်မံထောက်ပြခဲ့သည်။“ဒါက ဒီကနေ့မှာ အကြီးမားဆုံး ဆက်စပ်မှုခေါင်စဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကုန်သွယ်မှုနဲ့ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆီ တွန်းအားနဲ့ အရည်အသွေးအသစ်တွေ ပေးစွမ်းဖို့ စီမံထားတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
“အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ မတူတာကတော့ ကျွန်တော်တို့က ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြားမှ ကုန်သွယ်ရေးအနုတ်အသိမ်း ကြီးကြီးမားမား ကျဆင်းမှုကို ကာကွယ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဒါက တည်ငြိမ်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပြသနေပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားစဉ်ကတည်းက နှစ်နိုင်ငံလုံးသည် ရုရှားနိုင်ငံသားများ ပြန်လာရေး၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများ အပြန်အလှန်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် ကာကွယ်ဆေးဖော်ထုတ်မှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အပါအဝင် ကိစ္စရပ်များစွာ၌ နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အလေးထားပြောခဲ့သည်။(Xinhua)
"We can talk endlessly about Russian-Chinese cooperation that embracesavery wide range of spheres, almost all spheres of human activity, and the activities of states," Lavrov said.
MOSCOW, Jan. 18 (Xinhua) -- Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said Monday that Russia and China have builtatrusting relationship, and together the countries have the ability to counter foreign threats.
The minister emphasized that since the outbreak of the coronavirus pandemic, both countries have cooperated closely onarange of matters including the return of Russian citizens, provision of mutual humanitarian assistance, and cooperation on vaccine development. ■
Previous Article ဥရောပသမဂ္ဂက ယခုနှစ် နွေရာသီတွင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းအား COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှုပြီးစီးနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေ
Next Article ဘီလာရုစ်နိုင်ငံ တရုတ်-ဘီလာရုစ် စက်မှုဇုန်တွင် 5G အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှု အောင်မြင်